I-Android 6.0.1 inokuvumela i-lte band 12 ye-nex 5x kunye ne-6p kwi-t-mobile
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 6.0.1 inokuvumela i-LTE band 12 ye-Nexus 5X kunye ne-6P kwi-T-Mobile
Ukushiyeka ngelishwa kokusebenza kweNexus 5X entsha kunye neNexus 6P kukusilela kwenkxaso yebhendi ye-12 LTE kwiT-Mobile, nangona uGoogle ebesitsho oko ngaphambi kokuba izixhobo zikhululwe okokuqala ukuba ibisebenza ukongeza inkxaso. Ayinakuqinisekiswa, kodwa abanye abasebenzisi baxela ukuba uhlaziyo lwe-Android 6.0.1 lwenza ukuba inkxaso.
I-Android 6.0.1 nje waqala ukukhupha kwangoko namhlanje, ke azikho kwaye akukho bantu baninzi banesoftware okwangoku, kwaye bambalwa kakhulu abaya kujonga kunxibelelwano lwebhendi kumqondiso wabo we-LTE. Kodwa, kubekho abantu abambalwa ekufuneka bethunyelwe kwiiforamu ze-XDA ezinesikrini esibonisa inkxaso ye-12 LTE kuzo zombini i-Nexus 5X kunye ne-6P emva kohlaziyo olutsha.
I-T-Mobile iye yangqongqo malunga neefowuni ezingavulwanga ukuba ziqinisekiswe ngokufanelekileyo ngebhendi ye-12 LTE, kuba ithi ingadala iingxaki ngeefowuni ezingxamisekileyo ukuba izixhobo azinakho ukudibanisa. Kuyabonakala ukuba, ingxaki kukuba ngaphandle kwenkonzo ye-band 12, isixhobo sinokungabuyeli ekuzuleni njengoko kufanelekile, kwaye singabinakho ukwenza iifowuni ezingama-911, ezifunwa yiFCC. Ukusuka kumbono womsebenzisi, ibhendi ye-12 LTE iya kuthetha inkxaso ye-VoLTE yezixhobo ze-Nexus.
umthombo: Reddit & XDA nge Amapolisa e-Android
Iinkcukacha zomyalezo obhaliweyo vs umxholo
ipad pro vs ipad umoya
Iapile ukubukela uthotho 3 isebenza
I-1380 Galaxy Z Flip ye- $ iya kufumaneka kwezi venkile ze-AT & T ngomhla wokukhutshwa
Isamsung ithathe isigqibo sokwenza iitshipsi zeRadio FM kwii-smartphones zayo ezithengiswe e-US
Iindidi zovavanyo lweSoftware
I-Verizon ukuya kwi-ax 'izala' izicwangciso zedatha ezingenamda
I-AT & T inikezela ngenketho yokulungisa isikrini ukuba unayo i-inshurensi yefowuni
Indlela yokutshixa (kunye nokuthintela ukufikelela kuyo) ii -apps ezizodwa kwi-Android
Eyona ntengiso ye-Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kunye namaxabiso eVerizon, AT & T kunye nokuThenga ngokuBalaseleyo
Nazi izizathu zokuba kutheni iGoogle Nexus 6P kunye neNexus 5X zingafaki ukutshaja ngaphandle kwamacingo
Abathengi beT-Mobile banako & apos; ukuhlala unxibelelana 'kwaye ugcine iipesenti ezingama-50 kwizicwangciso zabo ngexesha lobhubhane we-coronavirus